မွေးနေ့မှာ Online ကနေ ၃၆ သိန်း မဲဖောက်ပေးမည့် သရုပ်ဆောင် Smile – Daily Feed MM
မွေးနေ့မှာ Online ကနေ ၃၆ သိန်း မဲဖောက်ပေးမည့် သရုပ်ဆောင် Smile
Admin_John | June 10, 2020 | Cele | No Comments
“မကြာမီမှာ ကျရောက်မယ့် သူမရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ SMILEY လေးတွေအတွက် သိန်းပေါင်း(၃၆)သိန်းဖိုး ပေးမယ့် အစီအစဉ်လေးလုပ်ထားတဲ့ စမိုင်းလ်”
ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်လေးစားအားပေးမှုတွေကို ရရှိထားသူ သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်.။ စမိုင်းလ်ကတော့ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားမှာပဲ အခြေချ ခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ ချစ်ရတဲ့ .
အဖွားဖြစ်သူတို့နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြန်လာနေနေပြီး သူမရဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ပြန်လည် လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်.။လိုအပ်နေတဲ့ လူတွေအတွက်လည်း ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ.။ အပေးအကမ်းရက်ရောသူ စမိုင်းလ်ကတော့ လာမယ့် ဇွန်လ (၂၁)ရက်နေ့ သူမမွေးနေ့အတွက်
လုပ်ဆောင်မယ့် အွန်လိုင်းဘက်ဒေး ပါတီအကြောင်းကို ဇွန်လ (၉)ရက်နေ့မှာ “ကျွန်မချစ်ရတဲ့ Smiley တွေကိုဘယ်လိုပျော်အောင်လုပ်ပေးရမလဲ ဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမလဲအမြဲစဉ်းစားနေတတ်တဲ့ကျွန်မ အခုမွေးနေ့လည်းနီးလာပြီဆိုတော့ ချစ်ရတဲ့သူတွေကို ဘာလုပ်ပေးရမလဲစဉ်းစားနေတာ….. အခုလို Covid အချိန်မှာလူတွေအဓိကလိုအပ်နေတာ
ပိုက်ဆံပဲဆိုတော့ Smile ရဲ့မွေးနေ့မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးဂိမ်းတွေလည်း Live ကစားကြမယ်။ Smiley တွေအကုန်လုံးကလည်းပါဝင်ကစားနိုင်မယ် ပြီးတော့ ကံစမ်းမဲတွေလည်းလုပ်မယ်။ ပထမဆု- (၁၀)သိန်း ၊ ဒုတိယဆု – (၅) သိန်းအပါအဝင် သိန်းပေါင်း (၃၆)သိန်းတိတိကို
ချစ်ရတဲ့သူတွေကို လက်ဆောင်ပြန်ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးကို (၂၁)ရက်နေ့ မှာကျင်းပမယ်နော်. ဒီ Page လေးကို Like နဲ့ See first လုပ်ထားကြအုန်းနော်.။“ Smile ရဲ့ Online Birthdayparty” ဆိုပြီး သူမရဲ့
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။စမိုင်းလ်ကတော့ သူမရဲ့ မွေးနေ့လေးကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အလိုအပ်ဆုံး အရာလေးတွေပေးပြီး ဖြတ်သန်းဖို့
စီစဉ်လိုက်တဲ့ ပုံပါပဲနော်..ပရိသတ်ကြီး.။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ဇွန်လ(၂၁)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် မွေးနေ့ပိုင်ရှင်မလေး စမိုင်းလ်ရဲ့ မွေးနေ့အစီအစဉ်လေးကို သဘောကျရင် မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ပါဦးနော်.။
Source: စမိုင်းလ် Smile’s Facebook
“မၾကာမီမွာ က်ေရာက္မယ့္ သူမရဲ႕ ေမြးေန႔ေလးမွာ SMILEY ေလးေတြအတြက္ သိန္းေပါင္း(၃၆)သိန္းဖိုး ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေလးလုပ္ထားတဲ့ စမိုင္းလ္”
ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္ခင္ေလးစားအားေပးမႈေတြကို ရရွိထားသူ သ႐ုပ္ေဆာင္ စမိုင္းလ္ကိုေတာ့ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္.။ စမိုင္းလ္ကေတာ့ သူမရဲ႕ ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားမွာပဲ အေျခခ် ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိမွာေတာ့ ခ်စ္ရတဲ့ .
အဖြားျဖစ္သူတို႔နဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပန္လာေနေနၿပီး သူမရဲ႕ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္.။လိုအပ္ေနတဲ့ လူေတြအတြက္လည္း ကူညီလႉဒါန္းမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူပါ.။ အေပးအကမ္းရက္ေရာသူ စမိုင္းလ္ကေတာ့ လာမယ့္ ဇြန္လ (၂၁)ရက္ေန႔ သူမေမြးေန႔အတြက္
လုပ္ေဆာင္မယ့္ အြန္လိုင္းဘက္ေဒး ပါတီအေၾကာင္းကို ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႔မွာ “ကြၽန္မခ်စ္ရတဲ့ Smiley ေတြကိုဘယ္လိုေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ေပးရမလဲ ဘယ္လိုစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ရမလဲအၿမဲစဥ္းစားေနတတ္တဲ့ကြၽန္မ အခုေမြးေန႔လည္းနီးလာၿပီဆိုေတာ့ ခ်စ္ရတဲ့သူေတြကို ဘာလုပ္ေပးရမလဲစဥ္းစားေနတာ….. အခုလို Covid အခ်ိန္မွာလူေတြအဓိကလိုအပ္ေနတာ
ပိုက္ဆံပဲဆိုေတာ့ Smile ရဲ႕ေမြးေန႔မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးဂိမ္းေတြလည္း Live ကစားၾကမယ္။ Smiley ေတြအကုန္လုံးကလည္းပါဝင္ကစားႏိုင္မယ္ ၿပီးေတာ့ ကံစမ္းမဲေတြလည္းလုပ္မယ္။ ပထမဆု- (၁၀)သိန္း ၊ ဒုတိယဆု – (၅) သိန္းအပါအဝင္ သိန္းေပါင္း (၃၆)သိန္းတိတိကို
ခ်စ္ရတဲ့သူေတြကို လက္ေဆာင္ျပန္ေပးမဲ့အစီအစဥ္ေလးကို (၂၁)ရက္ေန႔ မွာက်င္းပမယ္ေနာ္. ဒီ Page ေလးကို Like နဲ႔ See first လုပ္ထားၾကအုန္းေနာ္.။“ Smile ရဲ႕ Online Birthdayparty” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕
လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္.။စမိုင္းလ္ကေတာ့ သူမရဲ႕ ေမြးေန႔ေလးကို ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ အလိုအပ္ဆုံး အရာေလးေတြေပးၿပီး ျဖတ္သန္းဖို႔
စီစဥ္လိုက္တဲ့ ပုံပါပဲေနာ္..ပရိသတ္ႀကီး.။ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးလည္း ဇြန္လ(၂၁)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ ေမြးေန႔ပိုင္ရွင္မေလး စမိုင္းလ္ရဲ႕ ေမြးေန႔အစီအစဥ္ေလးကို သေဘာက်ရင္ မွတ္ခ်က္ေလးေတြ ေရးေပးခဲ့ပါဦးေနာ္.။
Source: စမိုင္းလ္ Smile’s Facebook
သရုပ်ဆောင် နဂါးလေးဝင်းနိုင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ မင်းသား မြင့်မြတ်
တာဝန်ယူထားတဲ့ ဘဝတွေအတွက် မားမားမတ်မတ်ရပ်သွားမယ့် ယုန်လေး
ဝေဖန်မှု တိုက်ခိုက်မှုတွေ အတွက် ဘုရားအရိပ်ခိုလှုံပြီး စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ယုန်လေး
ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြည့်ရတော့မယ် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်နဲ့ နယ်သာလန် နိုင်ငံသား ရီနီယာဒီရိုက်တာ တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ခါးပတ်ကာကွယ်ပွဲ